WMA magaabay: Sida loo jar WMA Files
Sida loo jar WMA faylasha iyo Top 10 jaraya WMA Best
Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda ku saabsan sida loo kala qaybsan tahay WMA files audio la saxda sare oo aan wax khasaare ah oo tayo leh maqal ah. Waxaa jira jaraya WMA yar ee suuqa iyadoo ujeedada qoraalkan. Si loo gooyay files WMA fiican, waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor).
Taasi Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ), kaas oo kuu ogolaanaya in aad si sax ah u soo saaro qaybaha aad soo xulay ee file WMA ah in mid cusub. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa WMA trimmer si sahlan loo isticmaalo in ay jar files audio in dhererka saxda ah aad rabto, kala jabeen file weyn dhowr files yar yimaa-mar ah, ama si toos ah u gooyay aad clips audio aan la rabin.
Tutorial hoose waxay aad u muujinaysaa tallaabooyinka faahfaahsan. Fadlan kala soo bixi oo hore loo soo dajiyo app this, ka dibna raac tallaabo tutorial talaabo ah.
1 dar files WMA in this magaabay WMA
Guji ka button inay ku shuban aad files WMA deegaanka si ay trimmer WMA this. Isla markiiba, aad ka ogaan doonto faylasha ayaa lagu daray in ay leeg- ee barnaamijkan.
2 Goo WMA galay clips
In app this, ka dhacay file WMA aad rabto in aad la gooyaa, ka dibna tag "Edit" ikhtiyaar in bar video shayga> "jar" semenu ah. Daaqadda dhisayaa-upka, waxaa jira laba sliders labada dhinac ee bar horumarka. Siday u kala horreeyaan jiidi oo hoos u labada sliders si ay u dejiyaan, bilowgii iyo waqtiga soo gabagabeeyay, ka dibna riix icon maqas-sida Macdan clip ee la doortay ee maqal ah. Markaas, riix "OK" si loo xaqiijiyo goobaha kuwan. Isla markiiba, aad arki doonaa clip ee la doortay audio ayaa sidoo kale lagu daray in ay leeg- ee this splitter WMA.
Waayo, clips audio rabin, kaliya waxa ay tirtirto. Haddii aad u baahan tahay inaad ku biirto clips badan audio mid, kaliya sax "midowdo oo dhan videos mid" hoose ee interface ugu weyn. Ka hor inta in, hubi in si play waa xaq sameeyo, ama aad u baahan tahay si ay u jiidi clips audio si ay u habayno.
3 dhoofinta files WMA cusub
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad si ay u doortaan "WMA" qaab ee "Qaabka" ayuu> "Audio", ka dibna riix "Beddelaan" button on geeska hoose ee midigta ah interface si ay u dhoofiyaan dhammaan faylasha WMA. Markii diinta la sameeyo, la furo folder wax soo saarka garaacida "Open Folder", waxaad ka heli doontaa WMA clip kasta waxaa lagu keydiyaa file hal.
Markaas halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya ee ugu fiican jaraya WMA si aad u soo qaado.
Winamp, gaar ahaan ka badan Winamp 5.6 version oo kor ku xusan waxaa loogu talagalay in ay oggolaadaan in goynta ee ballaaran ee video iyo files audio. Kuwaas waxaa ka mid mp3s, mp4s, avi, iyo dabcan, WMA kuwo kale. Ciyaaryahanka Winamp waa goynta ah runtii mid xiiso leh video maadaama ay sidoo kale leeyahay badan functionalities kale. Intaa waxaa dheer, waxa ay ka timaaddaa oo leh qaababka maqaarka iyo muuqaalaynta badan marka laga soo tago xaqiiqda ah in ay fududahay in la shakhsiyeeyo, set door bidayso, la abuuro playlists, badbaadin Bookmarks, iyo taariikhda hawlaha. Waxaa kale oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u xakameeyaan loo maqli karo, metadata nadiif ah oo isticmaalaya feature Auto-Tag iyo sidoo kale in ay wirelessly u hagaagsan warbaahinta la Winamp Android app.
FormatFactory waa mid kamid ah qalabka ugu wanaagsan ee diinta iyo goynta video ee suuqa. Software ma aha dhamaystiran oo kaliya laakiin sidoo kale taageertaa badan video maqal iyo qaabab. Its interface si kastaba ha ahaatee waa wax yar oo dhib badan inkastoo la fiiro dheeraad ah, xitaa arday si fudud u isticmaali kartaa qalabka. Kale oo ka goynta video, waxa ay bixisaa muuqaalada dheeri ah sida video ku biiro, audio soo biiray oo la isku daro. Tan ugu muhiimsan, waa FormatFactory freeware. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah inaad bixiso in habka loo xirxiro ama aad ku dhammaan karaan inay isag beddelo engine default raadinta.
Sida FormatFactory, ImgBurn yahay, software si sahlan loo isticmaalo, iyo awood leh oo lacag la'aan ah u goynta video iyo tafatirka inkastoo ay aasaasiga ah loogu isticmaalo qoraal image files iyo qori files si saxanno, iyo ku-xigeen qeybsanaan. Software wuxuu kuu ogol yahay user si fudud u dhammayn hawl badan, goynta WMA ka mid ahaa. Users Advanced sidoo kale ka bedeli kartaa qalab ee goobaha sare. Waxaa intaa dheer, barnaamijka taageertaa badan oo qaabab kale oo aan ahayn WMA qaab video video.
Xilisoft Video Converter waa mid ka mid ah dhowr sahlan ay u isticmaalaan WMA jaraya u Goynta Videos. Waxa kale oo uu fududeeyaa diinta ee clips cut qaababka isticmaali karo ka. Sida arrin xaqiiqada, waxa ay taageertaa badan 160 qaabab audio iyo video. Software ayaa si fiican u qeexay muuqaalada in ay si fiican u diyaarin in si fudud aad ku isticmaasho menu iyo halkan u fududahay in u arday iyo khubaro si isku mid ah iyaga si ay u isticmaalaan. La shaqaynta WMA video files ee Xilisoft Video Converter waa u fududahay. Mid ka mid fudud clip kartaa video files isticmaalaya clip shaqo. Tani waxay ku lug leedahay in si fudud xulashada bilowga iyo dhamaadka dhibcood clip qaybta aad rabto in aad ka gooyay.
ConvertXtoDVD waa aalad video tafatirka loo isticmaalo qoraalka iyo diinta. Waxay bixisaa shaqeynta loo baahan yahay loo baahan yahay in la abuuro gaar video files, eegin qaabka la doonayo. Its saarka files taageeraan oo dhan codecs video caan ah oo ay ka mid yihiin weelal WMA. Users sii dari kartaa files Cinwaan u files cut video. Intaa waxaa dheer, faylasha WMA cut la saxar kartaa duwan iyo iftiin. Sidoo kale muhiimada waa xaqiiqda ah in interface barnaamijka waa rata rafcaanka iyo fududahay in la isticmaalo. Sida xaqiiqadu, waa mid ka mid ah software ugu talinayaa in WMA video goynta.
Wixii BSPlayer lixaad
BSPlayer Pro waa keentay WMA qalab goynta u saamaxaya kuwa isticmaala si ay u dhinto meel gaar ah ka dibna files video in ay danaynayaan. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala jari karaa clips ka duwan videos iyo u isticmaalaan si ay u abuuraan hal video hybrid ah oo ku salaysan doorashadooda. Waxaa kale oo u ogolaanaya Kulanka Xiisaha Leh oo ka mid ah files WMA dhimo. Intaa waxaa dheer, waxaa saamaxaya kuwa isticmaala in ay qabsadaan videos la jarjaray sidii ay xaalkaa iyaga.
PRO 7aad ALLConverter
Tani Converter smart aad bixisaa 2 qaabab kala duwan si loogu badalo aad video files. Waxaad dooran kartaa si loogu badalo files video mid mid ama si loogu badalo files duwan oo isku mar. Thanks to video ciyaaryahanka isku dhafan aad awoodo inaad si toos ah u ciyaaro faylasha laga keeno ka interface barnaamijka. Faa'iidada muhiim ah utility tani waa in aad bixisaa tiro badan oo ah audio / video fursadaha processing sida: Video Encoder, muuqa, Size jir ah iyo in ka badan. All-beegyada, kuwaas oo ha idin xaalkaa aad videos si ay u kordhiyaan tayada. Waxaa intaa dheer, waxaad iyaga la shakhsiyeeyo karaa iyadoo ku daray watermarks.
8. Free Video magaabay
Free Video magaabay waa qalab ku anfacaya oo badh ah videos of qaab oo kala duwan, qaabab WMA ka mid ahaa. Users Macdan karo qayb ka mid ah WMA video files iyo badbaadin ee isku ee qaabab isku mid ah ama kala duwan. Waxa xusid mudan, barnaamijka waa u fududahay in la isticmaalo. Waxay leedahay daaqad hal bandhig u saamaxaya in ay ku eegaan videos la jarjaray sida shaqada soconayo. Intaa waxaa dheer, waxa uu aqbalay qaabab kala duwan oo ka dibna waxaa loo rogi karaa in ay WMA clips dhimo.
Boilsoft Video Splitter duwan software kale ka wada hadlay ugu horayn waxa loogu tala galay videos qaybsama. Codsiga waa mid fudud oo aan casri ah sida software kale la mid ah. Waxaa si kastaba ha ahaatee waxay u ogolaaneysaa goob yar oo gaadmada ah. Waxaa ka mid ah qaabab file in jari karaa waa WMA video files. Muhiimaddu waxaa weeye, dadka isticmaala si guul leh Macdan karaa qaybo video la sahlan oo aan tayo leh la waxyeelleeyey.
VSDC Free Video Editor waa software sare oo badh ah ee video clips, gaar ahaan ka badan WMA video files. In kasta oo laga bilaabo in la isticmaalo software yar laakiin falayaal caddayn karaan, software guud ahaan waa fududahay in la isticmaalo iyo tayada wax soo saarka aan gudanin markii clips movie ahaa waa la jaray iyo badbaadiyey. Intaa waxaa dheer, qalab tafatirka tani waxay u oggolaanaysaa in ay ku eegaan user qaybo vide sida ay gooyay hor inta aan la badbaadiyey. Tani waxay u ogolaaneysaa user si ay ula socdaan horumarka iyo halkan ka dhigi jeexan ugu fiican.
Haddii dhammaantood kuma adiga kugu haboon, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), kaas oo jari karaa qaabab kasta oo leh awood badan oo u fudud in ay isticmaalaan qalabka tafatirka. Download version maxkamad lacag la'aan ah sida hoos ku qoran.
Top 10 Android Apps: Watch TV iyo Movies Online For Free meel iyo goor kasta oo
> Resource > Video > Sida loo jar WMA faylasha iyo Top 10 jaraya WMA Best